iPod Touch 6G အသစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့အသေးစိတ်ဆန်းစစ်ပါသည် အိုင်ဖုန်းသတင်း
Juan Colilla | | အိုင်ဖုန်းသတင်း, iOS 8, iPod ကို, NOTICIAS, Apple ကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ
လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်က Apple သည်ပုံမှန်လည်ပတ်မှုကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး iPod Touch အသစ်ကိုအများပြည်သူထံထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ iPod ouch သည်နောက်ဆုံးပေါ် 5G iPod Touch မှရက်အနည်းငယ်အကြာအထိလွှဲပြောင်းယူရလိမ့်မည်။ သို့သော်ထိုနှစ်တွင် In ၏နောက်လိုက်များ၏မျှော်လင့်ချက်များရှိသော်လည်း ဒီလိုင်းမှာဖုန်းအသစ်မရှိဘူး၊ 5G ကိုအမြင့်ဆုံးထိပ်မှာထားတယ်၊ အခြားကမ္ဘာကဘာမှသယ်သွားမယ့်ပစ္စည်း၊ A5 ချစ်ပ် (iPhone 4S မှ) နှင့် RAM ၏တစ်ဝက် GB GB၊ ဒီနေ့ခေတ်ဝိသေသလက္ခဏာများ တစ်နေ့တွင်သူကသူ့အား iOS ထုတ်ကုန်များနှင့်အမီလိုက်ရန်ခက်ခဲစေသည်။
ကောင်းပြီ၊ မင်းသိပြီးသားပဲ မနေ့ကရုံမျိုးဆက်သစ် iPod Touch ကိုတိတ်တဆိတ်ဖြန့်ချိခဲ့သည်ကျွန်တော့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကဒီဘလော့ဂ်မှာမှတ်ချက်ပေးခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုက iPod 5,1 ကနေ iPod 7,1 ကိုသွားတဲ့ nomenclature ထဲကနံပါတ်တွေကိုကျော်သွားခဲ့ပေမယ့် iPod 6,1 ကော။
ကျွန်တော့်သီအိုရီကအရမ်းကိုရိုးရှင်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာမင်းကိုရှင်းပြပါမယ်၊ ပထမ ဦး ဆုံးမော်ဒယ်လ်နှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ချင်တယ်၊ ဒါကြောင့်သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးဘာတွေပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကြည့်မယ်။
ချစ်ပ် A5 Dual Corea1 GHz အမြန်နှုန်း ၏ဗိသုကာနှင့်အတူ 32-bits
512 ကို MB RAM ကို
ISight5Mpx ကင်မရာနှင့် 1,2 Facetime HD ရှေ့မျက်နှာစာ
၏ Focal ကို aperturef/ 2.4
Retina မျက်နှာပြင်4" resolution နှင့်အတူ IPS 1.136 × 640 (၃၂၆ ppi)
Wi-Fi က /b/ g / n (802.11n2နှင့်4GHz) ။
Full HD 1080p ဗီဒီယိုကို 30 fps ဖြင့်ရိုက်ကူးနိုင်သည်
32 နှင့် 64 GB ကိုသိုလှောင်မှုစွမ်းရည်
ချစ်ပ် A8 Dual Corea1,10 GHz အမြန်နှုန်း ၏ဗိသုကာနှင့်အတူ 64-bits
1 GB ကို RAM ကို
ISight ကင်မရာ 8 Mpx မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင် 1,2MP FaceTime HD မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသည်
၏ Focal ကို aperturef/ 2.2
ဝိုင်ဖိုင် Fi /b/ g / n / ac (2'4 နှင့်5GHz)
Full HD HD 1080p ဗီဒီယိုတွင် 30 fps
16, 32, 64 နှင့် 128 GB သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်
ဤစက်ပစ္စည်းများအကြားအဓိကကွာခြားချက်မှာ Processor တွင်ဖြစ်သည်။ A5 မှ A8 သို့သွားသောအခါစွမ်းအားအပြောင်းအလဲသည်ကြီးမားသောခုန်နိုင်ခြင်း၊ စက္ကူပေါ်တွင်နာရီအမြန်နှုန်းကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်မထင်နိုင်လောက်သောခုန်ခြင်း ၁၀၀ MHz ဆိုတာဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် A100 ရဲ့ cores တွေကို ၂၀ nm မှာထုတ်လုပ်ခဲ့တာကိုသိပြီး Enhanced Cyclone model ကိုလိုက်ပြီး 8-bit ဗိသုကာဆီကိုရွေ့လျားနေတယ်ဆိုရင်ရက်စက်တဲ့ခုန်ပျံကျော်လွှားမှုကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ ဂိမ်းကစားခြင်းတွင်တန်ဖိုးထားရမည့်ခုန်ခြင်းဖြစ်သည်.
ဘာကြောင့်ဂိမ်းကစားရတာလဲ အတူအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ A8 မှာ A5 နဲ့တွဲဖက်ထားတဲ့ GPU ထက်အများကြီးသာလွန်တဲ့ GPU ပါရှိပါတယ်, နှင့် GPU ကို CPU ၏ GHz ကသိပ်မအုပ်ချုပ်ပါ။ ဤကိစ္စတွင် GPU နှင့်ဆင်တူသည်သို့မဟုတ် iPhone6နှင့်တန်းတူဖြစ်သည်၊ Metal API နှင့်လိုက်ဖက်ညီအောင်လုပ်ခြင်းအပြင်အံ့ဖွယ်အမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။ The Graphic section မှာအလုပ်လုပ်ရရင်သူ့အရင်အရင်ထက်ဂရပ်ဖစ်အပြောင်းအလဲလုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုထောက်ပံ့ပေးတယ်၊ သင်အသုံးပြုချင်တဲ့ဂိမ်းပေါ် မူတည်၍ ခံစားခဲ့ရတယ်။
ဒါ့အပြင် iPhone6ထက် resolution နိမ့်ကျခြင်း၊ GPU ကအလုပ်နည်းတယ် ကျနော်တို့ဒီအပိုင်းမှာအလွန်အလွန်ကောင်းသောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြင်ရပါလိမ့်မည်သည့်အကြောင်းအရာကို rendering ရန်။
ပရိုဆက်ဆာအပြင်ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုကွဲပြားမှု၊ နည်းပညာအသစ်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမည့် Wi-Fi ချစ်ပ်နှင့်တိုးတက်မှုဗားရှင်းပင်ကွဲပြားမှုများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည် ဘလူးတုသ် ၅.၀ အဲဒါကသင့်ကိုအလွန်နီးကပ်သောအင်တာနက်အရာများအတွက်ပြင်ဆင်ပေးသည်။
iPod Touch အသစ်သည်ကန့်သတ်ချက်များမှကင်းလွတ်ခွင့်မပြုပါ။ ဤအကွာအဝေးတွင်တွေ့ရလေ့ရှိပြီးအမြင့်ဆုံးသောထုတ်ကုန်များအတွက်သီးသန့်ထားရှိသောအချို့သောအရာများမှာအကန့်အသတ်ရှိသည်။ Touch ID ကိုပိုက်လိုင်းတွင်ချန်ထားသည်သို့သော်၎င်းသည်၎င်းတို့အားတစ်ခုတည်းသောကန့်သတ်ချက်မဟုတ်ဘဲ ၁.၁၀ GHz အမြန်နှုန်းရှိနာရီအမြန်နှုန်းသည်အရေးကြီးသော်လည်းဤအမြန်နှုန်းသည်စနစ်အတွက်လုံလောက်သောစီးဆင်းမှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုကိုပေးလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်မှန်ကန်စွာအသုံးပြုခြင်းမရှိပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ iPhone 1 သည်ဗီဒီယိုများကို 10p နှင့်6fps (သို့) 1080p နှင့် 60 fps နှုန်းဖြင့်မည်သို့ဖမ်းယူနိုင်ကြောင်းကြည့်ပါ။ သို့သော် iPod Touch 720G သည်သာမှတ်တမ်းတင်နိုင်သည် 1080 fps မှာ FullHD 30p (5G ပြုလုပ်ပြီးဖြစ်သောအရာ) 720 fps နှင့် 120p ရှိသည် (iPhone 5S ကဲ့သို့) သို့သော်လည်း Jailbreak နှင့် PoomSmart ကဲ့သို့သောကင်မရာဆော့ဖ်ဝဲကိုလူသိများသော developer များအနေဖြင့် FullHD ကို 60 fps နှင့်အခြားသူများအနေဖြင့် FullHD ကိုခွင့်ပြုသည့်အကန့်အသတ်များကိုချိုးဖောက်နိုင်သည့်အပြောင်းအလဲများကိုမြင်တွေ့ရလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်သံသယမရှိပါ။ ဒီဟာ့ဒ်ဝဲကြောင့်ဖြစ်သည်
ဒါကိုကျွန်တော်သိချင်တာက၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပိုင်းကိုအခြားအရာများထက်ပိုပြီးရည်ညွှန်းသည်။ \_ t 5G iPod Touch သည် iPhone6ထက်ပိုမိုပါးလွှာပါသည် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့၎င်းသည်လူကြိုက်များသည့်ပစ္စည်းတစ်ခုမဟုတ်သောကြောင့်၎င်းသည်သတိမပြုမိဘဲ iPod Touch 6G ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကြည့်သောအခါ coprocessor၊ RAM နှင့်ဘက်ထရီတို့ကိုသူတို့လျောက်ပတ်စွာကိုင်တွယ်နိုင်စွမ်းရှိရန်လိုအပ်သည်ဟုထင်ခဲ့သည် အနည်းငယ်အဆီလုပ်
အံ့သြသွားတယ် iPod Touch 6G သည် iPod Touch 5G နှင့်တူညီသည်တိုင်းတာမှုရောအလေးချိန်ရော၊ ကိန်းဂဏန်းအတူတူပဲဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့မှာသေးငယ်တဲ့ processor၊ ပိုကြီးတဲ့ဘက်ထရီ၊ ခေတ်သစ်အစိတ်အပိုင်းတွေ၊ အံ့သြစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေကြောင့် iPod Touch Loop ပျောက်သွားတယ်။ iPod Touch ကိုသင့်လက်ကောက်ဝတ်မှာလုံခြုံအောင်တပ်ဆင်ရန်နှင့်ကြိုးတပ်ရန်အသုံးပြုသည့်ပြန်လည်ဆွဲယူနိုင်သောခလုတ်တစ်ခု၊ ကျွန်ုပ်အနည်းငယ်အသုံးပြုခဲ့သည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်ထိုတွင်ရှိကြောင်းကိုကျွန်ုပ်သိသောအခါ၎င်းကိုကျွန်ုပ်ပြုလုပ်လိုသောအခါလုံခြုံမှုပေးသည်။
အားလုံးပြောခဲ့တာကကိစ္စတွေအကြောင်းရင်းကိုစဉ်းစားဖို့ပဲကျန်သေးတယ်။ ဒီကိစ္စမှာ Apple ကပြီးပြီလို့ထင်ထားသည့်ကိရိယာကိုဘယ်လိုသတ်မလဲဆိုတာငါတို့မြင်နေရပြီ။ iPod Touch ဟာအရင်ကထက်ပိုမိုကောင်းမွန်လာပြီးပိုမိုအားကောင်းလာပါတယ်သက်တမ်းတိုးခြင်းမရှိဘဲ (သို့) မွမ်းမံရန်ကြိုးပမ်းမှုတွင်သေစရာမလိုဘဲအနည်းဆုံး (၂) နှစ် (၃) နှစ်ထိသက်တမ်းကိုဆက်လက်ရှင်သန်စေနိုင်မည့်ဟာ့ဒ်ဝဲဖြင့်အခြားတစ်ဖက်တွင်ရှိသောထိုရွေ့လျားမှုကိုဆက်လက်အသုံးပြုသောအက်ပဲလ်ထုတ်ကုန်အနည်းငယ်အတွက်ဖယ်ရှားပစ်လိုက်သည်။ အဟောင်းကိုဗိသုကာ 2-bit နဲ့သွားပါ 64-bits စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးပထမသုံး iPad Mini ပျောက်ကွယ်သွားသောကြောင့် ၄ နှစ်အတွင်း ၃ နှစ်အတွင်း 3-bit ဗိသုကာတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သည့် iOS ဗားရှင်းသစ်အတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောပြင်ဆင်မှုကိုပေးသည်။ ဗိသုကာနှစ်ခုလုံးအတွက်архитектураသို့မဟုတ် iOS ဗားရှင်းနှစ်ခုလုံးအတွက်အက်ပလီကေးရှင်းများကိုတီထွင်ရန်လိုအပ်ခြင်း၊ ပိုမိုကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်များကိုကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုခြင်းနှင့်လိုအပ်သောအားထုတ်မှုများလျှော့ချခြင်းကြောင့်အရည်အသွေးမြင့်မားနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iOS ကို » iOS 8 » iPod Touch 6G အသစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့အသေးစိတ်ဆန်းစစ်ပါသည်
အလွန်ကောင်းတဲ့မှတ်စု Juan ။
iPod ကို ဟုသူကပြောသည်
iPod Touch 6G သည်စာဖတ်ခြင်းကိုရပ်တန့်နေခြင်းမဟုတ်ပါ။
6g ဆဌမမျိုးဆက်ဆိုလို။ ဆက်ဖတ်ပါ
ငါလွန်ခဲ့သောတစ်ပတ်က 5G ကို ၀ ယ်တော့မည်ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်အပြင်၌ရှိသောအကြောင်းပြချက်များအရ ၀ ယ်ယူခြင်းကိုမပြုလုပ်ရ၊ ကျွန်ုပ်တန်ဖိုးထားသည်။ ယနေ့မဟုတ်လျှင်ကျွန်ုပ်သည်ငရဲကိုကျိန်ဆဲလိမ့်မည် hahaha
မှန်တယ် hahaha ငါဒီမျိုးဆက်ကို ၀ ယ်ဖို့သင်စဉ်းစားရန် ၁၀၀% အကြံပေးလိုပါတယ်၊
ကျွန်တော့် iPhone6မီးလောင်သွားတယ်။
လက်ရှိ jailbreak သည်ဤ ipod အတွက်သဟဇာတဖြစ်ပါသလား။
ဤထင်ရှားသောအချက်များအပြင်အခြားမည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုအရည်အသွေးကောင်းမွန်သောမျိုးပွားမှုအရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေပါက၎င်းသည်တည်ရှိသည့်အကောင်းဆုံးဂီတဖွင့်စက်ဖြစ်သဖြင့်သင်ရှာတွေ့နိုင်သလား။ ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒါဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့ထဲကတချို့ဟာအဲဒါကိုသုံးတာဖြစ်တယ်၊ ငါက iPhone ကိုမလိုချင်ဘူးလား (သို့) ဂီတကိုအရည်အသွေးကောင်းတဲ့သီချင်းနားထောင်ဖို့ iPhone ကိုမကြိုက်ဘူး။ မင်္ဂလာပါ
အတိအကျ! ဂီတကိုသိမ်းဆည်းဖို့ဒီအပတ် 32 gb iPod ကိုငါဝယ်ယူမယ်။ သိုလှောင်ခြင်းအစစ်အမှန်ဆိုတာဘာလဲ။ အမှန်တရားကအမြဲတမ်းကြေငြာတာထက်နည်းနေတယ်။
နှစ် ဦး စလုံးဟာကြီးကျယ်တယ်လို့ထင်တယ်၊ ပြီးတော့မင်းတို့သူတို့ကိုပျော်မွေ့ရမယ်။
ဒီဆောင်းပါးကကျွန်တော့်ကိုလွင့်ပစ်လိုက်ပြီ အံ့ It's စရာကောင်းသည်မှာသူသည်အသံတစ်စုံတစ်ရာကိုမဖော်ပြခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည် ငါကမင်းကိုကင်မရာတစ်လုံးရောင်းလိုက်သလိုမျိုးပဲ။ ငါက mpx, aperture, zoom စသည်ဖြင့်အရာအားလုံးအကြောင်းပြောပြသည်။ ကုမ္ပဏီတွေရဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေမှုကြောင့်သူတို့မသိရတဲ့လူတွေအပေါ်ရယ်မောမိတာဟာရှက်စရာပါပဲ။ ဤစာကိုရေးသူသည်တုန်လှုပ်သွားပြီးအိုင်ဖုန်းသတင်းသည်သူထုတ်ဝေသောအရာကိုအလေးအနက်သုံးသပ်သင့်သည်။
TaiG သည် beta 2.4.3 ကို jailbreak လုပ်ငန်းစဉ်အားကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။